Ahịa nke Alphabet Inc. taa, ụgwọ nke GOOG ngwaahịa online ugbu a, òkè ahịa nke Alphabet Inc..
GOOG = 1 464.70 US dollar
mgbanwe ego gbanwere kemgbe ụnyaahụ
Ọnụahịa ahịa nke Alphabet Inc. na US dollar nwere uru dị ala site na isi mmalite niile. A na-emelite ozi na ngbanwe nke Alphabet Inc. na US dollar otu ugboro n'ụbọchị. Ọnụahịa ọnụahịa maka ọnụahịa nwere uru dị mkpa kwa ụbọchị. Otu ngwaahịa nke Alphabet Inc. mụbara site na 69.73 US dollar. Alphabet Inc. ebilite na ikwu na US dollar kemgbe ụnyaahụ. Alphabet Inc. na - akwụ ụgwọ taa 1 464.70 ngwaahịa nke US dollar.
Alphabet Inc. òkè nke ụlọ ọrụ ahụ bara uru US dollar
Otu ọnwa gara aga, enwere ike ịzụta Alphabet Inc. maka 1 438.39 US dollar. Ọnwa atọ gara aga, enwere ike ịgbanwere Alphabet Inc. maka 1 186.92 US dollar. Afọ atọ gara aga, enwere ike ịgbanwere Alphabet Inc. maka 906.69 US dollar. 2% kwa izu - ngbanwe nke ọnụahịa ngwaahịa nke Alphabet Inc.. 1.83% - mgbanwe na ọnụahịa ngwaahịa nke Alphabet Inc. na US dollar kwa ọnwa. Mgbanwe nke ọnụahịa ngwaahịa nke Alphabet Inc. na US dollar otu afọ bụ 28.01%.
Ntụle ahịa Alphabet Inc. US dollar
GOOG Ka US dollar (USD)
1 GOOG 1 464.70 US dollar
5 GOOG 7 323.50 US dollar
10 GOOG 14 647 US dollar
25 GOOG 36 617.50 US dollar
50 GOOG 73 235 US dollar
100 GOOG 146 470 US dollar
250 GOOG 366 175 US dollar
500 GOOG 732 350 US dollar
Taa, enwere ike ịgbanwerịrị 10 nke Alphabet Inc. maka 14 647 US dollar. Ọ bụrụ na ị nwere 36 617.50 US dollar, mgbe ahụ na British Virgin Islands enwere ike ree ya maka 25 akụ nke Alphabet Inc.. Ọ bụrụ n ’50 ngwaahịa nke Alphabet Inc., mgbe ahụ na British Virgin Islands enwere ike ree ya maka 73 235 US dollar. Ọ bụrụ n ’100 akụ nke Alphabet Inc., mgbe ahụ na British Virgin Islands ị nwere ike ịzụta 146 470 US dollar. Taa, enwere ike renye ahịa 250 nke Alphabet Inc. maka 366 175 US dollar. Ọ bụrụ n ’500 akụ nke Alphabet Inc., mgbe ahụ na British Virgin Islands ị nwere ike ịzụta 732 350 US dollar.
GOOG ihe ndekọ akụkọ ego
Taa na 2 July 2020, 1 ngwaahịa nke Alphabet Inc. akwụ 1 464.700 US dollar. Alphabet Inc. na US dollar na 29 June 2020 - 1 394.970 US dollar. Alphabet Inc. na US dollar na 26 June 2020 - 1 399.110 US dollar. Alphabet Inc. na US dollar na 19 June 2020 - 1 431.720 US dollar. Opekata mpe Alphabet Inc. na US dollar ọnụ ahịa ngwaahịa maka ọnwa gara aga nọ na 29/06/2020.
Otu òkè nke Alphabet Inc. taa na-eguzo na 1 464.70 $. Ọnụ ego GOOG gbanwere na +4.76% ma ọ bụ +69.73 USD kemgbe ụbọchị ahịa ikpeazụ. Ị nwere ike ịzụta 100 mbak Alphabet Inc. maka 146 470 US dollar ma ọ bụ ree 50 mbak nke GOOG maka 73 235 US dollar.
Alphabet Inc bụ onye na-eweta ngwaahịa ọdịnaya na portals. Ụlọ ọrụ ya gụnyere Search, Android, YouTube, Ngwa, Maps & Mgbasa ozi.